याहु: चाहाना परिवर्तनको
“आई वान्ट चेन्ज माई लाईफ” गत साता आर्ट अफ लिभिङ (जीवन जिउने कला) योग शिविरको पहिलो दिन शिविरबाट तपाईको अपेक्षा के छ ? भनेर सोधीएको प्रश्नमा एक सहभागीले उत्तर दिएका थिए । उनको उत्तर सुन्दै गर्दा एक साथीले फेसबुक स्ट्याटस याद आयो “यो दिमाग फम्यार्ट गर्न पाए नि हुन्थ्यो नि !”
यी दुई प्रतिनिधि युवाको भावनालाई विचार गर्दा पुग्छ आधुनिक युवाको चिड्चिडिहाट र त्यसबाट मुक्तीका लागि परिवर्तन चाहान्छन् । यसका लागि विकल्प बनेका छन् योग, ध्यान र अध्यात्म प्रवचनका शिविरहरु ।
टेलिभिजनमा मात्र योग, ध्यानबारे हेरेको यो स्तम्भकारका लागि योग शिविरमा भाग लिनु फरक अनुभव लिने मौका थियो । योग प्रशिक्षक डा योगी विकासनन्दको योग र ‘मोटिभेसन’का प्रवचनहरु सुनेर चासो भने लागेको थियो । काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा देखेका योग केन्द्रका साथै भारतका योग गुरु नेपाल आउँदा लागेको भिडले पनि योगप्रति चासो बढेको हो ।
‘आर्ट अफ लिभिङ’ भारतका रविशंकरले आविश्कार गरेको एक आध्यात्मीक ध्यान विधि हो । यसै साता नेपाल आएका उनले खुल्लामञ्चमा हजारौ मानीस ध्यान र अध्यात्म सिकाए । आजभोली अध्यात्म र ध्यानमा युवा मन आकर्षित हुदैछ । आर्ट अफ लिभिङ’ को नेपालमा अनुयायी २५ हजार भन्दा बढी छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै कलेजमा अध्ययनरत युवायुवती छन् । त्यसैगरी ओशोको तपवन, स्वामी आनन्द अरुण र डा विकासान्नदका शिविरहरुमा युवायुवतिको ठुलो भिड लाग्न थालेको छ ।
एक तथ्यांक अनुसार नेपालका एक युवाले एक हजार युवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यसैले युवालाई मानसिक तनाव व्याप्त छ । द्धन्द्धपछिको सक्रमणकालीक राजनीतिक अवस्थामा बेरोजगारीका कारणले युवाको समस्या झन् बढ्दो छ ।
दौडधुप र प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थी दुनियमा युवाका लागि जीवन जिउने कला त झनै आवश्यक छ । समस्या र तनावका विचमा पनि सकारात्मक सोचका साथ शान्त जीवन जिउनका लागि ध्यान र योगका शिविर उपयुक्त हो । शान्त जीवन बिताउन, जीवनमा सफलता पाउन र दुव्र्यसनीबाट छुटाउनका लागि पनि योग केन्द्रहरु उपयुक्त केन्द्र बन्न सकिन्छ ।
तीन दिनको योग शिविर सकिएपछि पाएको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मनको शान्ति हो । जसन हामीले बाहिरी संसारबाट पाउन असम्भव छ । बाहिरी संसारबाट पाउने आनन्द क्षणिक हुन्छ भने अन्तरमनबाट प्राप्त हुने आनन्द र आत्वविश्वास दिर्घकालिन हुन्छ ।
सुनकोसी साप्ताहिकमा वैशाख २१ गते (4 may) प्रकाशीत
Posted by Journalist Yadav at 2:41 AM
Journalist Yadav September 16, 2019 at 10:35 PM
तल्लोघरको ठुले कतार गयो रे !
युवा रोजगारका लागि आईटी क्रान्ति
अनुजासँग जोडिएको प्रसंग